ရောက်တတ်ရာရာအတိုအစများ – MoeMaKa Burmese News & Media
April 25, 2013 April 25, 2013 Aung Htet
● အောက်စ်ဘုခ် ရှေးဟောင်းမြို့တော်သို့ (တစ်)
အောက်စ်ဘုခ်မြို့လယ် Freie und Reichsstädte (de) Free Imperial City (en)
ယနေ့ ဂျာမဏီနိုင်ငံရဲ့ တတိယရှေးဟောင်းအကျဆုံးမြို့ ဘိုင်ယန်ပြည်နယ်ရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်တဲ့ Augsburg အောက်စ်ဘုခ်မြို့ကို အလည်တခေါက် ရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်၊ ဒီမြို့လေးအနီးက Meitingen မိုင်တင်ဂန်ဆိုတဲ့အရပ်မှာ အခြေချနေထိုင်နေတဲ့ မိတ်ဆွေမိသားစုရှိတာကြောင့် တနှစ် တခေါက်ဆိုသလို ရောက်ဖြစ်နေတာပါ၊ နေရာတနေရာ ဒေသတခုကို ရက်အနည်းငယ်နဲ့ စုံအောင် ရောက်ရှိနိုင်ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး၊ ဥရောပရဲ့ အားသာချက်က နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာ တည်ရှိခဲ့တဲ့ သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာတွေကို ထိမ်းသိမ်းပြုပြင် စောင့်ရှောက်ထားနိုင်ခဲ့တာပါဘဲ၊ အပေါ်ယံလေး ထုံးသုတ် နှမ်းဖြူးထားတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး၊ အခုခေတ်လို လူတိုင်းလူတိုင်း ခရီးတွေသွားလာနိုင်တဲ့ အခါကာလမျိုးမှာတော့ ဒါတွေကနေ ရရှိတဲ့ဝင်ငွေကကိုဘဲ မနည်းမနော ဘီလီယံနဲ့ချီပြီး ရရှိနေပါပြီ၊
အောက်စ်ဘုခ်မြို့ဆိုတာကလည်း ယနေ့ကာလ လူသိများထင်ရှားနေတဲ့ ဂျာမဏီရဲ့ တခြားမြို့ကြီး တွေလို နာမည်မကြီးပေမဲ့ သူ့သမိုင်းကြောင်းကတော့ သေးလှတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ရှေးအဟောင်းဆုံး မြို့တမြို့ဖြစ်သလို သမိုင်းကြောင်းအရ ရောမအင်ပါယာခေတ်က နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်လောက် (၁၂၇၆-၁၈၀၃) Free Imperial City ခေါ်သီးခြားမြို့ပြနိုင်ငံတခုအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ မြို့တမြို့ပါ၊ နောက်အထူးခြားဆုံး တခုကလည်း Augsburger Hohes Friedensfest (The Augsburg High Peace Festival) ခေါ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရှစ်ရက်ရှစ်လမှာ ကျင့်ပပြုလုပ်တဲ့ အောက်စ်ဘုခ်ငြိမ်းချမ်းရေး ပွဲတော်ပါဘဲ၊ ဒီငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော်ကို ၁၆၅၀ ခုနှစ်က စတင်ကျင့်ပ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယနေ့ခေတ် အခါမှာတော့ ဂျာမဏီနိုင်ငံတဝှန်းလုံး အောက်စ်ဘုခ်တမြို့တည်းမှာသာ အထူးခံစားခွင့်ရထားတဲ့ အလုပ်ပိတ်ရက် ကျောင်းပိတ်ရက် ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီငြိမ်ချမ်းရေးနေ့ဆိုပြီး ပေါ်ပေါက်လာရတာကတော့ အောက်စ်ဘုခ်မြို့မှာ ပရိုတက်စတင့်နဲ့ ကာသိုလစ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့အကြား ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူနေ ထိုင်ကြရေး စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ရာက ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါတဲ့၊
ပြင်သစ်အမြန်ရထား SNCF TGV
အောက်စ်ဘုခ်မြို့ဟာ ပါရီ-မြူးနစ် အမြန်မီးရထားလမ်းမပေါ် မြူးနစ်မြို့မရောက်ခင် မိုင် ၄၀ ခန့်မှာ တည်ရှိပါတယ်၊ မိုင်ပေါင်း ၅၀၀ ခန့်ဝေးကွာသော ဒီခရီးကို ဒီတခါစီးဖြစ်တာက ပြင်သစ်အမြန်ရထား TGV ဘဲဖြစ်ပါတယ်၊ နှစ်လလောက်အလိုက ကြိုတင်လက်မှတ် ဝယ်ယူထားလို့ ယူရို ၅၀ ဗမာငွေ ငါးသောင်းခန့်သာ ပေးရပါတယ်၊ အရေးတကြီးမသွားမဖြစ် နီးမှကပ်ပြီးဝယ်မယ်ဆိုရင် ယူရိုငွေ ၁၅၀ အထက်ဈေးပေါက်ပါတယ်၊ ပါရီ-မြူးနစ် အမြန်ရထားလမ်းမကြီးပေါ်မှာ တည်ရှိတဲ့မြို့ အမည်များက ရိုင်းမြစ်ကမ်းပေါ်က ပြင်သစ်ဂျာမန် နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့ စထရပ်ဘူး Strasbourg၊ ဂျာမဏီ မြို့ကြီးများ ဖြစ်ကြတဲ့ Karlsruhe,Stuttgart,Ulm,Augsburg တို့ဘဲဖြစ်ကြပါတယ်၊ တီဂျီဗွီရထားဟာ မိုင်ပေါင်း ၃၀၀ နီးပါးရှိတဲ့ ပြင်သစ်ဘက်အခြမ်းမှာ အမြန်ရထားလမ်းသစ်ကြီး LGV L’est Européenne စီမံကိန်း တစိတ်တပိုင်း ပြီးစီးသွားခဲ့လို့ တနာရီကို ကီလိုမီတာ ၃၂၀ မိုင်နဲ့ဆိုရင် ၂၀၀ နှုန်းလောက် အထိတင်ပြီး မောင်းပါတယ်၊ ဂျာမဏီဘက်အခြမ်း အရောက်မှာတော့ တနာရီကို ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ကျော် ၂၅၀ လောက်သာ မောင်းပါတော့တယ်၊ အမြန်ရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ စနစ်တွေမှာ ဂျာမဏီနဲ့ ပြင်သစ် မတူညီတာကတော့ ပြင်သစ် High-speed rail လမ်းက အမြန်ရထားတွေသာ သီးသန့်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ ဂျာမဏီကတော့ ဒေသအတွင်းသွားတဲ့ ရိုးရိုးရထားတွေပါ ဒီအမြန် ရထားလမ်းတွေပေါ်မှာ ရောပြီးမောင်းကြတာပါ၊ အဲဒါကြောင့် ဂျာမဏီဘက်ရောက်ရင် ရထားက အရှိန်လျှော့ပြီး မောင်းနေရတာပါ၊ ဂျာမဏီရဲ့မြို့တွေကလည်း တမြို့နဲ့တမြို့ ပိုပြီးနီးကပ်ပါတယ်၊ သီးသန့်အမြန်လမ်းဖောက်ဖို့ စီမံကိန်းတွေက ရှိတော့ရှိနေပါပြီ၊ ဘယ်တော့ပြီးမလည်းတော့ မသိပါ၊ ပြင်သစ်မြေ ပါရီအရှေ့ခြမ်းဒေသမှာတော့ အမြန်လမ်း ကီလိုမီတာ ၁၃၀၀ ကျော် ဖောက်လုပ် ပြီးစီး နေပါပြီ၊ ပါရီ မြူးနစ်ခရီးကတော့ စုစုပေါင်း ၆ နာရီကြာ မောင်းရတဲ့ခရီးပါ၊ ဒီလောက် အမြန်နှုန်း တင်ပြီးမောင်းနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် ပြင်သစ်အမြန်ရထားကြီးရဲ့ ချို့ယွင်းချက်တခုကတော့ အိမ်သာ အခန်းထဲမှာ အိမ်သာသုံးစက္ကူ ပြတ်လပ်သွားခြင်းပါဘဲ၊ အထက်ပိုင်းက တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ညံ့ဖျင်း မှုကြောင့်လား အလုပ်လုပ်သူတွေရဲ့ ပေ့ါလျှော့မှုကြောင့်လားတော့မသိပါ၊ သေခြာတာတခုကတော့ စီးပွားရေး ကျပ်တည်းလာမှုတွေနဲ့အတူ အခြေခံအလုပ်သမားတွေရဲ့ အရာရာမှာ မကျေနပ်မှုတွေ တိုးပွားလာနေပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှာ ခိုကပ်လာတဲ့သူတွေ များလာတာ ဆိုတာပါဘဲ၊
ဘိုင်ယန်ရထား BAHNLAND BAYERN Regional Express (RE)
မောင်ရင်ငတေရဲ့ တည်းခိုရမယ့် နေရာကတော့ မြူးနစ်မြို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ မြူးနစ်မြို့ကို ဂျာမန်လို ရေးတာကတော့ München လို့သာ ရေးတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ၊ မြူးနစ်မရောက်ခင် အောက်စ်ဘုခ် ဘူတာမှာဆင်းပြီး Nürnberg နူရင်ဘာ့ခ်မြို့ကိုသွားတဲ့ ရထားကို ၁၅ မိနစ်လောက် စီးလိုက်ရင် မောင်ရင်ငတေရဲ့ မိတ်ဆွေများနေထိုင်ရာ Meitingen မိုင်တင်ဂန်ဆိုတဲ့ ရထားလမ်းနဘေးက မြို့လေးကို ရောက်ပါတယ်၊ ဒီမြို့ဘူတာအသေးလေးမှာတော့ ICE ခေါ် အဖြူရောင် ဂျာမန် အမြန်ရထားတွေ ရပ်လေ့ရပ်ထ မရှိပါဘူး၊ ဒေသအတွင်းသွား RE နဲ့ RB အနီရောင်ရထားတွေနဲ့ ဟိုနားဒီနားသွားတဲ့ လော်ကယ်ရထားတွေသာ ရပ်နားပါတယ်၊
အောက်စ်ဘုခ်ခရိုင်တွင်းသွား လူငါးယောက် တရက် စီးနိုင်တဲ့ မိသားစုလက်မှတ်
ဂျာမန်ရဲ့ ရထားလက်မှတ်ရောင်းတဲ့ နည်းစနစ်တွေကတော့ မှတ်သားဘွယ်ရာ ကောင်းလှပါတယ်၊ ရောင်းချပုံစနစ်တွေက ခရီးသွားပြည်သူတွေ အစဉ်ပြေချောမွေ့အောင် စီစဉ်ပေးထားသလို ဈေးနှုန်း သက်သာစွာနဲ့ ခရီးသွားခရီးထွက်ချင်သူတွေ ပိုများပြားအောင် ဆွဲဆောင်ထားပါတယ်၊ ဋ္ဌာနေသမား အမြဲနေထိုင်သူတွေအတွက် လပေးလက်မှတ်နဲ့ နှစ်ပေးလက်မှတ်ဆိုပြီး စီမံထားတာမျိုးကတော့ ဥရောပရဲ့ မြို့ကြီးတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာ ရှိတာကြောင့် မထူးဆန်းလှပါဘူး၊ မောင်ရင်ငတေတို့လို တခါတရံလာရောက် လည်ပတ်သူ ခရီးသွားတွေအတွက် စီမံပေးထားပုံက ထူးခြားတာပါ၊ မြို့တမြို့ ဇုံတဇုံအတွက်လက်မှတ် ပြည်နယ်တခုချင်းစီအတွက်လက်မှတ် တနိုင်ငံလုံးသွားတဲ့လက်မှတ် စနေ တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်အတွက်လက်မှတ် ရုံးဖွင့်ရက်များအတွက်လက်မှတ် တယောက်နှစ်ယောက်ချင်း ငါးယောက်တအုပ်စုလက်မှတ် စသဖြင့် တန်ဖိုးအမျိုးမျိုး ပုံစံအမျိုးမျိုး သတ်မှတ်စီမံပေးထားတာပါ၊ လက်မှတ်တစောင်ချင်းစီ လူတယောက်ချင်းစီ အတွက်ကတော့ တခြားနိုင်ငံ တခြားမြို့တွေထက် ထူးပြီးမသက်သာလှပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ လူနှစ်ယောက် သုံးလေးငါးယောက် အုပ်စုနဲ့သွားရင်တော့ သိသိ သာသာကို သက်သာလှပါတယ်၊ ဥပမာအားဖြင့် ဘိုင်ယန်ပြည်နယ်ရထားလက်မှတ်က တဦးတည်း သွားမယ်ဆိုရင် ၂၂ ယူရိုပေးစီးရမှဖြစ်ပြီး နောက်တဦးတိုးတိုင်း လေးယူရို ထပ်ဆောင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ငါးယောက်ပါဝင်တဲ့ အုပ်စုတစုကို ၃၈ ယူရိုကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ မနက်ကိုးနာရီကနေ နောက်တနေ့မနက် သုံးနာရီထိ စီးနိုင်ပါတယ်၊ အဖြူရောင်အမြန်ရထား ICE တို့ IC တို့စီးခွင့်မရှိဘဲ ဒေသတွင်းသွား ရထားတွေကိုသာ စီးနိုင်ပါတယ်၊ ဒီလော်ကယ်ရထားတွေက ရုံးချိန်ကျောင်းချိန်မှာ လူကျပ်လေ့ရှိပေမဲ့ တခြားကြား အချိ်န်တွေမှာတော့ လူသိပ်မရှိပါဘူး၊ ဘိုင်ယန်ပြည်နယ်က ဂျာမဏီ အကျယ်ဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်လို့ စီးရတာပိုတန်သလိုပါ၊ အရှေ့ဘက်ချက်နယ်စပ် သြစတြီးယားနယ်စပ် တောင်ဘက်က ဆွစ်နယ်စပ်ထဲအထိ ဘိုင်ယန်လက်မှတ်နဲ့ သွားလို့ရပါတယ်၊
ဘိုင်ယန်ပြည်နယ်တွင်း ဟိုနားဒီနားသွား လော်ကယ်ရထားများ Bayerische Regiobahn (BRB)
ဂျာမဏီနိုင်ငံရဲ့ စီပွားဖွံ့ဖြိုးမှု တိုးတက်မှုများနဲ့အတူ တနိုင်ငံလုံးကို ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ ရထားလမ်း ကွန်ယက်တွေကတော့ ပင့်ကူမျှင်ထက်တောင်မှ ရှုပ်ထွေးလှပါပေတယ်၊ ၁၈၃၅ ခုနှစ်က စတင်ခဲ့တဲ့ Deutsche Bahn ရထားဋ္ဌာနကြီးဟာ အခုဆိုရင် ဂျာမဏီနိုင်ငံတဝှန်း ရထားလမ်းအရှည် မိုင်ပေါင်း နှစ်သောင်းခွဲကျော်ရှိနေပြီး ထက်ဝက်ကျော်ကျော်က လျှပ်စစ်ဓါတ်အားနဲ့ပြေးဆွဲတဲ့ ရထားလမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီနေရာမှာတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံထက် ပိုပြီးသေးငယ်တဲ့ ဂျာမဏီနိုင်ငံရဲ့ ရထားလမ်း စုစုပေါင်းအရှည်က မိုင်တသောင်းရှစ်ထောင်ကျော်သာရှိတဲ့ ပြင်သစ်ထက် မိုင်ခုနှစ်ထောင်လောက် ပိုပြီးများနေတာပါ၊ အဲဒါကြောင့်လည်းဘဲ မနီးမဝေး တမြို့ကနေတမြို့ တရွာကနေတရွာ နေ့စဉ် နေ့တိုင်းလိုလို မီးရထားကိုသာ အဓိကအားကိုးအားထားပြုပြီး ကျောင်းသွား ရုံးတက် ဈေးဝယ်ထွက် နေသူတွေကို အများအပြား တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊
လူဦးရေ တသောင်းခန့်သာနေထိုင်တဲ့ အဲဒီမိုင်တင်ဂန်မြို့လေးမှာ ကမ္ဘာ့ရှေ့ဆောင် Carbon fiber ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ SGL Carbon ကုမဏီရဲ့ ပင်မစက်ရုံကြီးတခု ရှိပါတယ်၊ ဒီစက်ရုံကြီးမှာ မောင်ရင်ငတေရဲ့ မိတ်ဆွေတဦး ရောက်ရှိပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတာ ၁၅ နှစ်နီးပါး ရှိနေပါပြီ၊ အဲဒီ စက်ရုံကြီးမှာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတချို့ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်၊ မိုင်တင်ဂန်ရွာကလေးမှာက ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မရှိလှပါဘူး၊ ၁၉၂၀ ခုကာလက စတင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဒီကာဘွန်စက်ရုံကြီးမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ အများစုနေထိုင်ကြလို့ စက်ရုံလုပ်သားတွေရဲ့ မြို့တမြို့လိုသာ ဖြစ်နေပါပြီ၊ မိုင်တင်ဂန်နဲ့ အောက်စ်ဘုခ်ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားတာကတော့ ၂၆၄ ကီလိုမီတာရှည်တဲ့ Lech မြစ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်၊ သြစတြီးယားနိုင်ငံ တောင်တန်းဒေသတွေပေါ်တည်ရှိတဲ့ Lech မြို့အနီးက မြစ် ဖျားခံလာတဲ့ ဒီမြစ်ဟာ အောက်စ်ဘုခ်နဲ့ မိုင်တင်ဂန်ကို ဖြတ်သန်းသွားပြီး Donauwörth မြို့အနီးမှာ နာမည်ကျော် Donau ဒိုနောင်ဝ်မြစ်ထဲကို စီးဝင်သွားတာပါ၊ Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Moldova, Ukraine, Romania အနောက်အလယ်အရှေ့ ဥရောပဆယ်နိုင်ငံကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းတဲ့မြစ် ရှေးဟောင်းသမိုင်းအရရော ခေတ်သစ်ယနေ့ကာလ နိုင်ငံလေးနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်များက ဒီမြစ်ကမ်းဘေးနဖူးမှာ တည်ရှိနေတဲ့မြစ် ရေကာတာဆည်ပေါင်း အကြီးအသေး ၇၀၀ ကျော်တည်ဆောက်ထားတဲ့မြစ် ဥရောပရဲ့ ဒုတိယအရှည်ဆုံးမြစ် ၁၇၈၅ မိုင် ၂၈၇၅ ကီလိုမီတာကျော်အရှည်ရှိတဲ့မြစ် ဂျာမန်လို Donau ဒိုနောင်ဝ်မြစ် အင်္ဂလိပ်လို Danube ဒန်ညုမြစ်ခေါ် ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ ဒေသတွေရဲ့ဆိုင်ရာ ဘာသာစကားတွေအရ Dunaj, Dunărea, Donava, Duna, Dunav, Дунав, Tuna လို့ခေါ်ကြတဲ့ မြစ်ကြီးပါ၊ ဒီမြစ်ကြီးအကြောင်းကို သေခြာ ရေးချင်ပါသေးတယ်၊
မိုင်တင်ဂန်ရွာအနီး Lech လာ့ရ်ှမြစ်ကမ်းနဘေးက ကျေးလက်လမ်း
အောက်စ်ဘုခ်မြို့ကတော့ လာ့ရ်ှမြစ်ကမ်းပေါ်က အကြီးဆုံးအထင်ရှားဆုံး စက်မှုလုပ်ငန်း တိုးတက် အဖွင့်ဖြိုးဆုံး ရှေးဟောင်းအကျဆုံးသော မြို့တမြို့ ဖြစ်ပါတယ်၊ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော် မြို့ပြနိုင်ငံ အဖြစ် ရပ်တည်လာတဲ့ အောက်စ်ဘုခ်မြို့ဟာ တချိန်တုန်းကတော့ ဂျာမဏီနိုင်ငံရဲ့ အထည်အလိပ် လုပ်ငန်းတွေ များပြားစွာထွန်းကား တည်ရှိခဲ့တဲ့ မြို့တမြို့လည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်၊
ယခုအခါမှာတော့ ယင်းချည်ထည်လုပ်ငန်းတွေထက် တခြားသောစက်မှုလုပ်ငန်းတွေ ပိုများပြားလာခဲ့ပါပြီ၊ ဂျာမဏီရဲ့ တနိုင်ငံလုံးလိုလိုမှာ မတွေ့မဖြစ်တွေ့ရမှာကတော့ ဘီယာချက်စက်ရုံများပါဘဲ၊ မြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာ ဒေသထွက် ဘီယာအမျိုးမျိုး ရှိနေပါတယ်၊ ဂျာမဏီရောက် ကိုရွှေဗမာကို ပြည်တွင်းမှာနေထိုင်သူ သူငယ်ချင်းတဦးက မေးပါတယ်တဲ့၊ မင်းတို့နေတဲ့ဂျာမဏီပြည်မှာ ဘာဘီယာအမျိုးအစားကောင်းပြီး ဘယ်ဘီယာကို သောက်ပါသလဲလို့ပါ၊ ဂျာမဏီရောက်က ပြန်ဖြေပါတယ်၊ ဒီဟာက နာမည်ကြီးပြီး သောက်လို့ကောင်းလို့ ဒီဟာကိုသောက်ပါတယ်ပေ့ါ၊ ပြည်တွင်းကသူငယ်ချင်းက သူမကြားဖူးပါဘူး၊
အိတ်စပို့မလုပ်ဘူးလားလို့ ထပ်မေးပါတယ်၊ ပြန်ဖြေသူက အိတ်စပို့လုပ်မလုပ်မသေခြာဘူး၊ သေခြာ တာကတော့ ဂျာမန်တွေ သူတို့ထွက်တဲ့ဘီယာ သူတို့သောက်တာ လောက်ဟန်မတူပါဘူးလို့သာပါ၊ ဟုတ်လည်းဟုတ်လောက်ပါတယ်၊ ဘီယာတံဆိပ်အမျိုးမျိုး ငါးထောင်ကျော်နဲ့ တနှစ်ကို ငါးဘီလီယံ လီတာ ထုတ်လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်၊
၂၆၄ ကီလိုမီတာရှည်တဲ့ လာ့ရ်ှမြစ်
အောက်စ်ဘုခ်နယ်တကြောမှာ အဲဒီခေတ် ၁၄ ရာစုက ထွန်းကားခဲ့တဲ့ ချည်ထည်ရက်ကန်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရင်း ချမ်းသာလာတဲ့ မိသားစုကတော့ Fugger မိသားစုဘဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ Johann (Hans) Fugger စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဒီမိသားစုလုပ်ငန်းတွေဟာ Johann ရဲ့ မြေးအငယ်ဖြစ်သူ Jakob Fugger von der Lilie (၁၄၅၉-၁၅၂၅) လက်ထက်မှာတော့ ပိုမိုတိုးပွားလာပြီး သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေကိုပါ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့တာပါ၊ သူဟာ ၁၆ ရာစု အစပိုင်း ဥရောပဒေသတခုလုံးရဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေကို ချုပ်ကိုင်ခဲ့သူတဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်၊ သူကိုယ်တိုင်ဦးစီးခဲ့တဲ့ ယနေ့ခေတ်ထိ တည်ရှိနေသေးသော လုပ်ငန်းကတော့ Fuggerei ခေါ် လူမှုအိမ်ယာလုပ်ငန်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်၊
Die Fuggerei ဖူဃရိုန်း The world’s oldest social housing complex still in use.
၁၄၅၉ ခုမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ အောက်ဇ်ဘုခ်မြို့သား သတ္ထုတွင်းလုပ်ငန်းရှင် ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင် Jakob Fugger ဟာ ၁၅ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာ ဥရောပတလွှား ထင်ရှားခဲ့တဲ့ သူဌေးကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီ အချိန်က သူဟာချမ်းသာလွန်းလို့ သူ့အမည်ကိုတောင်မှ Jakob Fugger the Rich လို့ခေါ်တွင်ခဲ့ပါ တယ်တဲ့၊ Jakob Fugger ရဲ့ငွေးကြေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဟာ ဥရောပငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အီတလီ ဖလောရင်မြို့က Famiglia de’ Medici ခေတ်ပြီးရင် Fugger ခေတ်ဆိုပြီး ဦးစီးဦးဆောင် နေရာမှာ ရှိခဲ့တာပါ၊ Jakob Fugger ဟာ Upper Hungaria ခေါ်ယနေ့ Slovakia စလိုဗာကီးယား နယ်မြေကထွက်ရှိတဲ့ ကြေးနီတွေကို သြစတြီးယား ဂျာမဏီတင်မက နယ်သာလန် ဘယ်လ်ဂျီယံ ကနေ စပိန် ပေါ်တူဂီ အီတလီ နောက်ပြီး အိန္ဒိယထိတိုင် တင်ပို့ရောင်းချရင်း ပိုမိုကြီးပွား ချမ်းသာ လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့၊ Die Fuggerei ဆိုတာကတော့ ၁၅၁၆ ခုနှစ်မှာ သူကိုယ်တိုင် စတင် ဦးစီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံး လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး အိမ်ယာစခန်း ဖြစ်ပြီး ယခုထက်ထိတိုင်အောင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေဆဲလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်၊ သူဟာ သူပိုင်ဆိုင် တဲ့ ငွေတွေနဲ့ သူရဲ့အကောင်းဆုံးသော လူမှုရေး လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ ဖူဃရိုန်းခေါ် လူမှုအိမ်ယာစခန်းကို တည်ထောင်ခဲ့တာပါ၊ ယနေ့ကာလမှာတိုင် အဲဒီအိမ်ယာမှာ နေထိုင်နေသူတွေဟာ တနှစ်နေထိုင်ခ တယူရိုတောင် မပြည့်တဲ့ ၈၈ ဆင့်သာ ပေးရပါတယ်တဲ့၊ လုံးချင်းအိမ်ကလေးပေါင်း ၆၇ လုံးမှာရှိတဲ့ အိမ်ခန်းပေါင်း ၁၄၀ မှာ နေထိုင်သူပေါင်း ၁၅၀ ကျော်လောက် ရှိပါတယ်တဲ့၊ ဘယ်လို စာရွက် စာတမ်းတွေပြပြီး ဘယ်လိုနေထိုင်ခွင့်ရကြသလဲ ဆိုတာကတော့ အထူးက်ိုစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်း လှပါတယ်၊ အဲဒီလောက်ထိ အသေးစိတ်ကိုတော့ မောင်ရင်ငတေလည်း မစုံစမ်းမသိရှိနိုင်ကြောင်းပါ ခင်ဗျာ၊ သိရှိမည်ဆိုပါကလည်း အဲဒီ ဖူဃရိုန်း အိမ်ယာစခန်းမှာ အသက်ရွယ် အိုမင်းမစွမ်းရှိလာရင် နေထိုင်လိုကြောင်း လျှောက်ထားပြီးနောက် ဘယ်လောက် အချိန်ကာလတိုင်အောင် စောင့်ဆိုင်း ရမယ် ဆိုတာကိုလည်း မခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းပါ၊
မိုဇာ့တ် အဖေရဲ့အဖိုး Franz Mozart ဖူဃရိုန်းဂေဟာမှာ နေထိုင်သွားတဲ့ အထိမ်းအမှတ်
Die Fuggerei အဆောက်အဦများဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ ဗုံးဒဏ်တွေကြောင့် အကြီးအကျယ် ပျက်စီးခဲ့ရပြီး မူလပုံစံအတိုင်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားတဲ့ အဆောက်အဦများကို ဒီကနေ့မှာ တွေ့မြင်နေရတာပါ၊ ဖူဃရိုန်းပြတိုက်ကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုချင်ရင်တော့ လေးယူရိုပေးပြီး ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်၊ ကမ္ဘာကျော် ဂီတစာဆို Wolfgang Amadeus Mozart မိုဇာ့တ် (၁၇၅၆-၁၇၉၁) ၏ အဖေရဲ့အဖိုး အုတ်စီပန်းရန်ဆရာကြီး အောက်စ်ဘုခ်မြို့သား Franz Mozart (၁၆၄၉-၁၆၉၃) ကတော့ ဒီဂေဟာမှာ ၁၆၈၁ ကနေကွယ်လွန်ခဲ့သည့် ၁၆၉၃ ခုနှစ် ထိတိုင် နေထိုင်သွားခဲ့ပြီး အစဉ်အဆက် နေထိုင်သွားကြတဲ့သူတွေ အထဲမှာတော့ အကျော်ကြားဆုံးသော အထင်ပေါ်ဆုံးသောသူ တဦးပါဘဲ၊
မိုဇာ့တ် အဖေ Leopold Mozart နေထိုင်သွားရာ Das Mozarthaus အိမ်ပြတိုက်
မိုဇာ့တ်၏ အဖေရဲ့အဖိုး အုတ်စီ ပန်းရန်ဆရာကြီး Franz Mozart က အောက်စ်ဘုခ်မြို့သားစစ်စစ် ဖြစ်သလို မိုဇာ့တ်ရဲ့အဖေ ဂီတစာဆို ဂီတမှူး တယောပညာရှင် Johann Georg Leopold Mozart လီယိုပို မိုဇာ့တ် (၁၇၁၉-၁၇၈၇) ကလည်း အောက်စ်ဘုခ်မြို့သား ဖြစ်ပါတယ်၊ ကမ္ဘာကျော်မိုဇာ့တ် ကတော့ အောက်စ်ဘုခ်မြို့သားတဦး ဖြစ်မလာခဲ့ဘဲ ဖခင်မိုဇာ့တ် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရာမြို့ဖြစ်သော အောက်စ်ဘုခ်မြို့ အရှေ့တောင်ဘက် ကီလိုမီတာ ၂၂၀ ကျော်ကွာဝေးတဲ့ ဂျာမဏီနဲ့သြစတြီးယား နယ်စပ်မြို့ သြစတြီးယားပြည်ရဲ့ စတုတ္ထအကြီးဆုံးမြို့ Salzburg ဆားဇ်ဘုခ်မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့တာပါ၊ ဘိုင်ယန်ပြည်နယ် အရှေ့တောင်ဘက်တခြမ်းလုံးဟာ သြစတြီးယားပြည်နဲ့ နယ်နမိတ်ချင်းထိတွေ့ ဆက်စပ်နေပြီး အစဉ်အဆက် ယဉ်ကျေးမှုချင်းလည်းတူသလို စကားပြောတာကလည်း တူပါတယ်၊ ဒါကြောင့် မိုဇာ့တ်တို့ ဘိုးဘွားဘီဘင်ခေတ်များ ကာလများကပင် အကူးလူး အဆက်ဆံများခဲ့ကြတဲ့ နေရာဒေသတွေ ဖြစ်ပါတယ်၊ အောက်စ်ဘုခ်ကနေ ဆားဇ်ဘုခ်မြို့ကို သွားမယ်ဆိုရင် ဘိုင်ယန်နယ် လက်မှတ်ဝယ်ပြီး သက်သက်သာသာ နေ့ချင်းပြန် သွားလို့ရပါတယ်၊ ဂျာမန်နယ်စပ်လိုင်းကို ကျော် လိုက်တာနဲ့ ဆားဇ်ဘုခ်မြို့ကို ရောက်ပါပြီ၊ မိုဇာ့တ်တို့သားအဖကတော့ ဒီမြို့နှစ်မြို့ ဒီအိမ်နှစ်အိမ်ကို ကူးချီသန်းချီ နေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ၊
လီယိုပို မိုဇာ့တ် ရဲ့ Versuch einer gründlichen Violinschule တယောတီးနည်းစာအုပ် ၁၇၅၆
ကမ္ဘာကြီးမှာ မိုဇာ့တ်ဆိုပြီး ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တာဟာ သူရဲ့ဖခင် လီယိုပိုမိုဇာ့တ်ကြောင့်ဆိုရင် မှားတယ်လို့ ဘယ်သူမှာ ငြင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ စာအုပ်ချုပ်သမား Johann Georg Mozart (၁၆၇၉-၁၇၃၆) ရဲ့သားဖြစ်သူ လီယိုပိုဟာ ၁၇၃၇ ခုနှစ်သူ့အသက် ၁၈ နှစ် ဆားဇ်ဘုခ်မြို့မှာ ကျောင်းသွား မတက်ခင်ကတည်းကိုက တယောနဲ့ စန္ဒယား အတီးကို ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ၊ လီယိုပိုဟာ ဆားဇ်ဘုခ်မြို့တွင် ဆက်လက်နေထိုင်နေရင်း ၁၇၄၇ ခုမှာ ဆားဇ်ဘုခ်မြို့သူ Anna Maria Pertl Mozart ဆိုသူနဲ့ ရပြီးတော့ သားဖြစ်သူ ကမ္ဘာကျော် မိုဇာ့တ်ကို မွေးဖွားခဲ့တာပါ၊ လီယိုပိုမိုဇာ့တ် ရေး သားပြုစုခဲ့တဲ့ တယောတီးနည်းစာအုပ် A Treatise on the Fundamental Principles of Violin Playing ကို သားမိုဇာ့တ်မွေးဖွားခဲ့တဲ့နှစ် ၁၇၅၆ ခုနှစ်မှာ ပထမအကြိမ် ဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်၊ ဒီစာအုပ်ကို ၁၇၆၉ နဲ့ ၁၇၈၇ မှာ ထပ်မံ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ၁၇၆၆ မှာ နယ်သာလန်ဒတ်ရှ် ဘာသာစကားဖြင့်၎င်း ၁၇၇၀ မှာ ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်၎င်း ပြန်ဆိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်၊ ကမ္ဘာကျော် မိုဇာ့တ်ရဲ့ အမအရင်း Maria Anna Walburga Ignatia Mozart III (Nannerl) (၁၇၅၁-၁၈၂၉) ကလည်းဘဲ မွေးရာပါ အနုပညာဗီဇ ပါခဲ့သူတဦးပါ၊ ဒါပေမဲ့ သူမကတော့ သူမရဲ့ အနုပညာဗီဇများကို သူမရဲ့ မောင်ဖြစ်သူ လောက် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားအောင် ပြသခွင့်မရခဲ့ပါဘူး၊ အဖေမိုဇာ့တ်ဟာ သူ့သားနဲ့သမီးဖြစ်သူရဲ့ ငယ်ဆရာအရင်းလို့လည်း အများကသတ်မှတ်လို့ ထားကြပါတယ်၊
လီယိုပိုမိုဇာ့တ်၊ harpsichord စန္ဒယားတီးနေတဲ့ ၇ နှစ်သားမိုဇာ့တ်နဲ့ အမ Maria Anna Mozart
မိုဇာ့တ်တို့မိသားစု ဥရောပတခွင် လှည့်လည်စဉ် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ရထားလုံး
၁၇၆၃ ကနေ ၁၇၆၆ ခုနှစ် အတွင်းမှာ လီယိုပိုမိုဇာ့တ် ဦးဆောင်ပြီး သူရဲ့မိသားစုဝင်များ အားလုံး ပါဝင်တဲ့ The Mozart family grand tour လို့ အမည်တွင်ခဲ့တဲ့ အနောက်ဥရောပတခွင် လှည့် လည်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ငါးလရက်နှစ်ဆယ်ကြာ ခရီးစဉ်ကတော့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သလို နောင်တချိန် မိုဇာ့တ် ဆိုပြီး ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာမဲ့ သားမိုဇာ့တ်အတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ရေးခရီးစဉ်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီခရီးစဉ်မှာ အသက် ၇ နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ ကမ္ဘာကျော်မိုဇာ့တ် အပါအဝင် မိသားစုဟာ သူတို့ပိုင်ရထားလုံးနဲ့ သြစတြီးယားပြည် ဆားဇ်ဘုခ်မြို့ကနေ အသွားခရီးကို ၁၇၆၃ ခု ဇူလိုင်ကိုးရက်နေ့က စတင်ထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ၊ ဒီခရီးရဲ့ပထမနေ့မှာဘဲ သူတို့လှည်းရဲ့ ဝင်ရိုးကျိုး ပါတယ်၊ ဂျာမန်နယ်စပ် Wasserburg မြို့အနီးမှာပါ၊ လှည်းနားရပေမဲ့ အဖေမိုဇာ့တ်ကတော့ မနား အားဘဲ သူ့မိသားစုရဲ့ဂီတပွဲနဲ့ ဖျော်ဖြေရေးပွဲတွေရအောင် လုပ်ခဲ့တာမျိုးပါ၊ မြူးနစ်မြို့ရောက်တော့ အဲဒီအချိန်က ဘိုင်ယန်နယ်စားပယ်စား Maximilian III Joseph, Elector of Bavaria ရှေ့မှောက် မှာ ဖျော်ဖြေခွင့်ရခဲ့ပြီး တညတည်းနဲ့ ဆုတော်ငွေရခဲ့တာ အဲဒီတုန်းက ဂျာမဏီမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ငွေ ၃၅၄ Gulden သို့မဟုတ် forint ရခဲ့ပါတယ်တဲ့၊ အဖေမိုဇာ့တ်လီယိုပိုရဲ့ တနှစ်လစာငွေရဲ့ထက်ဝက် ကျော်ခန့်ရှိတဲ့ ချီးမြှင့်ရရှိခဲ့တာပါ၊ မိုဇာ့တ်မောင်နှမကို ကြိုက်လွန်းကြလို့ ဒီလောက်ပမာဏ ရရှိခဲ့ တာပါတဲ့၊ အဲလိုမျိုးနဲ့ သူတို့ရှေ့ခရီးတွေ ဆက်ခဲ့ကြတယ် ထင်ပါတယ်၊
၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်းရဲ့ သမိုင်းဝင် နယ်လှည့်ဂီတခရီး
ဂျာမဏီ München (Munich), Mannheim, Mainz, Frankfurt, Köln (Colonge) အဲဒီအချိန်က Austrian Netherlands လို့ခေါ်တဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ Liège, Bruxelles, Luxemburg ကတဆင့် ပါရီမြို့သို့ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ရောက်ရှိလာပြီး ငါးလကျော်ကြာနေထိုင်ပါတယ်၊ ထို့နောက် ပါရီ မှတဆင့် Calais မြို့အနီး ယခုခေတ် နာမည်ကျော် Channel Tunnel တည်ရှိရာနေရာမှ အင်္ဂလိပ် ရေလက်ကြားကိုကူးခါ Dover မှတဆင့် လန်ဒန်မြို့သို့ ၁၇၆၄ ခုနှစ် အေပရယ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ရောက်ရှိသွားပြန်ပါတယ်၊ လန်ဒန်မြို့တွင် တနှစ်ကျော်ကြာ နေထိုင်စဉ်အတွင်း ထိုခေတ်ထိုအခါက အင်္ဂလန်ပြည်တဝှန်းမှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေသူများနှင့် ဂီတဆွေးနွေးပွဲများ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါတွေကနေပြီးတော့ ကမ္ဘာကျော်မိုဇာ့တ်ရဲ့ နာမည်ကျော် ဆန်ဖိုနီ တေးသွားတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့တာ ဖြစ်မှာပါ၊ မိုဇာ့တ်တို့ လန်ဒန်ရောက်နေစဉ်မှာ အုပ်စိုးနေတဲ့ဘုရင် George III ရဲ့မိဖုရားက ၁၉ နှစ်အရွယ် ဂျာမန်သူ Charlotte of Mecklenburg-Strelitz Sophia ဖြစ်ပါတယ်၊
လန်ဒန်က အပြန်ခရီးမှာတော့ ဒိုဗာ ပြင်သစ်ပြည် ကာလေမြို့ Lille လီလ်မြို့မှတဆင့် ဘယ်လ်ဂျီယံ Gand (Gent), Anvers (Antwerp) ထို့နောက် နယ်သာလန်နိုင်ငံ Den Haag (The Hague) သို့ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် ၁၇၆၅ မှာရောက်ပါတယ်၊ Haarlem,Utrecht နဲ့ အမ်စတာဒမ်မြို့သို့လည်း ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်၊ နယ်သာလန်ရောက်နေစဉ်မှာ မိုဇာ့တ်တို့သားအဖတတွေ ခရီးပန်းပြီး နာမကျန်း ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်၊ ထို့နောက် မေလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ပါရီမြို့သို့ ဒုတိယအကြိမ် ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်၊ နှစ်လအကြာ ပါရီမြို့မှာနေပြီး Dijon ဒီရွန်မြို့ Lyon လီယွန်မြို့များကတဆင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာ ဇူးရစ် လူဇမ်းမြို့များကို ဝင်ရောက်ပါတယ်၊ အဲဒီကမှ ဂျာမဏီမြူးနစ်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး ဆားဇ်ဘုခ်မြို့ Getreidegasse လမ်းရှိ နံပတ်ကိုး နေအိမ်ကိုတော့ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက် ၁၇၆၆ မှာ ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီး ခရီးစဉ်ကို အောင်မြင်စွာနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်၊ သုံးနှစ်ခွဲကျော် ရထားလုံးစီးပြီး ဥရောပ ၈၈ မြို့ကို ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်ဟာ ခုခေတ် ခုအခါလို အမြန်ရထားတွေ မှန်လုံကားတွေ လေယာဉ်ပျံတွေနဲ့ သွားမယ်ဆိုရင်တောင်မှ သွားဖို့လွယ်ကူလှတဲ့ ခရီးမဟုတ်ပါဘူး၊ ဇိမ်ခံခရီးလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ လေ့ကျင့်ရင်း လေ့လာရင်း ဖျော်ဖြေပွဲတွေလုပ်ရင်း သွားခဲ့တဲ့ခရီးပါ၊ တဦးတယောက် တည်းသာ သွားတဲ့ခရီးလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ မိသားစုဝင်ကလေးတွေနဲ့ သွားခဲ့တဲ့ခရီးပါ၊ လီယိုပိုရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အဆက်သွယ်တွေနဲ့ တမြို့ပြီးတမြို့ သွားခဲ့တာပါ၊ လန်ဒန်ခရီးတောင်မှ ပါရီမြို့သို့ရောက် ရှိပြီးမှ အစီအစဉ်ထဲ ပါလာတာမျိုးပါတဲ့၊ ကာလေမြို့ကနေ ဒိုဗာမြို့ကို သွားဖို့ခရီးမှာ ရေလက်ကြား ဖြတ်သန်းရန် ၁၃ ရက်ကြာခဲ့တာမျိုးတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့၊ အခုခေတ်များဆိုရင်တော့ ပါရီ လန်ဒန် ယူရိုစတားရထားနဲ့သွားတာ နှစ်နာရီ ကျော်ကျော်သာ ကြာတော့ပါတယ်၊
Wolfgang Amadeus Mozart in 1763, aged seven, at the start of the Grand Tour. He is wearing livery presented by the Empress of Austria the previous winter.
မွေးအမည် Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart ခေါ်တဲ့ မိုဇာ့တ်က သားအငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး မွေးချင်း ၇ ယောက် ရှိခဲ့ပေမဲ့ သူ့အထက်ငါးယောက်ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက သေဆုံးခဲ့လို့ မိုဇာ့တ်မှာ အမတယောက်တည်းသာ အဖော်ရှိခဲ့ပါတယ်၊ ဥရောပဂန္တဝင်ခရီးစဉ် အတွင်း နယ်သာလန်နိုင်ငံ Den Haag မြို့ကိုရောက်ရှိနေခိုက် အသက်ကိုးနှစ်သား အရွယ်ခန့်သာ ရှိသေးတဲ့ မိုဇာ့တ်ရဲ့ Six sonatas for keyboard and violin ကို ရေးဖွဲ့သီကုံးခဲ့တာကတော့ မယုံကြည်နိုင်ဘွယ်ရာ ကောင်းလှပါတယ်၊ မိုဇာ့တ်ရဲ့ ဒီဂန္တဝင်ခရီးကို မသွားခင်မှာလဲ ၁၇၆၂ ခုမှာ မိုဇာ့တ်မိသားစုဟာ မြူးနစ်မြို့နဲ့ ဗီယာနာမြို့ကို သုံးလကျော်ကြာ ခရီးထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်၊ အဲဒီ ဗီယာနာသွားတဲ့ခရီးမှာ မိုဇာ့တ်ဟာ သူနဲ့သက်တူရွယ်တူ တနှစ်ကျော်သာကြီးတဲ့ နောင်တချိန် ပြင်သစ်သမိုင်းမှာ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားလာမယ့် လူဝီ ၁၆ ရဲ့ ဇနီးချောလေးဖြစ်လာမယ့် သြစတြီးယားမင်းသမီးလေး Marie Antoinette နဲ့လည်း ဆုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်၊ ဒီဂန္တဝင်ခရီး အပြီးမှာ အီတလီနဲ့ ချက်နိုင်ငံ ပရာဟာသို့လည်း ပညာရှာရင်း အလုပ်ရှာရင်း ခရီတွေ ထွက်ခဲ့ပါတယ်၊ ၁၇၇၈ မှာ မိုဇာ့တ်တို့ သားအမိ အလုပ်ရှာဖို့ ပါရီကိုတခေါက် ထပ်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်၊ ပါရီရောက်စဉ် မိုဇာ့တ်ရဲ့အမေ Anna Maria Mozart နာမကျန်းဖြစ်ပြီး ဆုံးပါသွားခဲ့ပြီးနောက် မိုဇာ့တ်တယောက် တည်းသာ ဆားဇ်ဘုခ်မြို့ကို ပြန်ခဲ့ရပါတော့တယ်၊
မိုဇာ့တ် မွေးဖွားခဲ့ရာ ဆားဇ်ဘုခ်မြို့က Mozarthaus မိုဇာ့တ်အိမ်ပြတိုက်တည်ရာလမ်း
အောက်စ်ဘုခ်အကြောင်း ရေးရင်းနဲ့ ပေရှည်သွားလို့ မခွဲချင်ဘဲ နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ရကြောင်းပါ၊ နောက် တပတ်ရေးမယ့် အောက်စ်ဘုခ်အပိုင်းနှစ် မှာတော့ လီယိုပို မိုဇာ့တ်ကဲ့သို နောက်ထပ် ကမ္ဘာကျော် အောက်စ်ဘုခ်မြို့သားများဖြစ်ကြတဲ့ ကဗျာဆရာကြီး ဘားတော့ဘရက်ရယ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်စက်ကို တီထွင်ခဲ့သူ ရူဒေါ့ဖ်ဒီဇယ်တို့ရဲ့ အကြောင်းနဲ့ အောက်စ်ဘုခ်မြို့အကြောင်းတွေကို သိသလောက် တတ်သလောက် ဆက်လက်ရေးသားမှာ ဖြစ်ကြောင်းပါ ……
Jakob Fugger von der Lilie (၁၄၅၉-၁၅၂၅) ဖူဃရိုန်းဂေဟာ တည်ထောင်သူ
Franz Mozart (၁၆၄၉-၁၆၉၃) အုတ်စီ ပန်းရန်ဆရာကြီး
Johann Georg Mozart (၁၆၇၉-၁၇၃၆) စာအုပ်ချုပ်သမား
Leopold Mozart လီယိုပို မိုဇာ့တ် (၁၇၁၉-၁၇၈၇) ဂီတစာဆို ဂီတမှူး တယောပညာရှင်
Maria Anna Walburga Ignatia Mozart (၁၇၅၁-၁၈၂၉)
Wolfgang Amadeus Mozart ကမ္ဘာကျော်မိုဇာ့တ် (၁၇၅၆-၁၇၉၁)
← Maung Maung Gyi passed away
May 25th – NYC Meeting with 88 Generation Leaders →
September 2, 2016 September 2, 2016 Aung Htet